United States | Freedom News Group
AK-47 သေနတ် ကို တီထွင် ခဲ့ သူ အသက် ၉၄ နှစ် မှာ ကွယ်လွန်
ငှက်ပျောသီး ပုံစံ ကျဉ်ကပ် ကွေးကွေး လေးကြောင့် လူသိများ ခဲ့ တဲ့ AK-47 သေနတ်
ကို တီထွင် ခဲ့ တဲ့ ရုရှား လူမျိုး မီခေလ်း ကလက်ရှ် နီကောဗ် ဟာ အသက် ၉၄ နှစ် အရွယ် Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Dec 14
လေဆိပ် ကို ဖောက်ခွဲ ဖို့စီစဉ် နေ ချိန် မှာ FBI က ဖမ်းဆီး ရမိ
FNG အသက် ၅၈ နှစ် အရွယ် ရှိ ပြီ ဖြစ်တဲ့ လေကြောင်း ပျံသန်းမှု ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်း Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Nov 25
Jason Szep Andrew R.C. Marshall | Reuters
(Reuters) – He’s the flashiest tycoon in one of Asia’s poorest cities, withacanary-yellow Lamborghini parked outside his neoclassical mansion. Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Aug 24
1 Comment	တပ်ကြပ်ကြီး ရောဘတ် ကို အာဖဂန် အရပ်သား တွေ သတ်မှု နဲ့ထောင်ဒဏ် တစ်သက်ချ
အာဖဂန် နစ္စတန် နိုင်ငံ ကန်ဒါဟာ မြို့တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ က အမျိုးသမီး ၃ ဦး
နှင့် ကလေး ၉ ဦး အပါ အ၀င် အရပ်သား ၁၆ ဦး ပစ်ခတ် ခဲ့သည့် အမေရိကန် ကြည်း Read more
ဘင်လာဒင် ရဲ့သမက် နဲ့အယ်(လ)ကာယီးဒါး ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ကို ဖမ်းဆီး ရမိ
အိုစမာဘင် လာဒင် ရဲ့သမက် လည်း ဖြစ် တစ်ချိန် က အယ်(လ)ကာယီးဒါး အကြမ်းဖက်
ကွန်ယက် ရဲ့ပြော ခွင့် ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သူ ဆူလေမန် အဘူဂိတ် ကို ဂျော်ဒန် နိုင်ငံ မှာ ဖမ်းဆီး Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Apr 27
ကမ္ဘာ့ ဘဏ် မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ရုံးခွဲ ဖွင့် မည်
သီရီထက် ၊ ကမ္ဘာ့ ဘဏ်မှာ တင်ရှိ နေတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ က အကြွးတွေ ပြန်ဆပ် နိုင် ဖို့၊
နိုင်ငံ ရေး ၊ စီးပွားရေး နဲ့ပတ်သက် ပြီးသိသာထင်ရှားတဲ့ အပြောင်းအလဲ တွေ ကို ဖော် ဆောင်
မှုတွေ ကို လေ့လာ စောင့် ကြည့် ဖို့ကမ္ဘာ့Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Apr 18
အမေရိကန် နှင့် မြန်မာ ကဏ္ဍ တစ်ချို့အတွက် ငွေကြေးလွှဲပြောင်း နိုင်တော့မည်
လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှု ၊ ဘာသာရေး နှင့် အကျိုးအမြတ် မယူသော လုပ်ငန်းများ အတွက်
အမေရိကန်မှ မြန်မာ ကို တိုက်ရိုက် ငွှေလွှဲပြောင်း နိုင်တော့ မည်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါ နေ့ က အမေရိကန် Read more
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,726,603 hits